I-china Wear kunye nefuthe lokumelana ne-92 alumina ceramic lining cone tube / taper tube for mining conveyor pipeline mveliso kunye nabathengisi | YUNFENG
Ukunxiba kunye nefuthe lokumelana ne-92 alumina ceramic lining cone tube / taper tube for mining conveyor pipeline
Ingcaciso yeMveliso Inkqubo yokuPhathwa kweMpahla yokuNqanda i-Ceramic Elbow Elbow Eyona ndlela ineendleko zokunxiba ukumelana nengqiniba kunye ne-tee Sinho use paste, i-welding okanye i-dovetail yokulungisa i-ceramic enganyangekiyo eludongeni lwangaphakathi lombhobho, ukwenza umaleko owomeleleyo we-abrasion. Ngokumelana nokunxiba okungaphezulu kuye kwasetyenziswa ngokubanzi kumashishini oshishino ngokudlulisa umoya, inkqubo yokuhambisa ngesanti kubunzulu baphantsi, ngakumbi indawo yokhukuliseko lwengqiniba, iti kunye nomhambisi wayo. Yeyona intle ...
Inkqubo yeArasras yokuXhathisa iMathiriyeli yokuGcina i-Ceramic Elbow
Ezona ndleko zixabisekileyo zinxiba ukumelana nengqiniba kunye tee
Sinho sebenzisa uncamathisele, ukuwelda okanye ukwenza intambo yokuluka ukulungisa i-ceramic enganyangekiyo eludongeni lwangaphakathi lombhobho, ukwenza umaleko owomeleleyo wokukrwada. Ngokumelana nokunxiba okungaphezulu kuye kwasetyenziswa ngokubanzi kumashishini oshishino ngokudlulisa umoya, inkqubo yokuhambisa ngesanti kubunzulu baphantsi, ngakumbi indawo yokhukuliseko lwengqiniba, iti kunye nomhambisi wayo. Lelinye lawona majelo maxabiso aneendleko ezifanelekileyo.
Cola: ngaphantsi kwama-300 ℃
Welding: ngezantsi kwe-600 ℃
I-Dovetail: ngaphantsi kwe-800 ℃
Amasuntswana Solid ezifana umgubo wamalahle, uthuthu, zeBlack oluludaka, ezifana oluludaka yamalahle, zeBlack, kunye aluminiyam ulwelo.
Ubunzima bepayipi edibeneyo ifika nje kwisiqingatha sombhobho wamatye kwaye malunga neepesenti ezingama-50 zombhobho we-alloy. Ngezibonelelo zokunxiba kunye nokumelana, ixesha lokuphila lombhobho libalaseleyo ngokude kuneminye imibhobho enganyangekiyo yokunxiba ngenxa yoko indibano kunye nokubaleka kuncitshisiwe.
Ngenxa yobunzima bayo bokukhanya kunye nobuchule obuhle be-weld, inokudityaniswa ngokulula nge-welding okanye uqhagamshelo lwe-flange kwaye inciphise ngokuphawulekayo iindleko zokulungisa.
Ngokobungakanani bombhobho kunye nokuhambisa izinto, olu hlobo lwemibhobho lunokukhethwa ukuba lusebenzise iintlobo ezimbini zesakhiwo se-ceramic, ityhubhu ye ceramic iyonke okanye iithayile zekheramu ezifakwe kumbhobho wentsimbi. I-SINHO inokubonelela ngemibhobho ngokuhambelana neemfuno zabathengi.Iyabonakaliswa kakhulu ukubonelela ngezixhobo zakho zemizobo kunye neempawu zesimo sesayithi, ke siya kubonelela ngenkqubo efanelekileyo yokurhoxisa kunye nokunxiba.
Egqithileyo nxiba ityhubhu yentsimbi enganyangekiyo
Okulandelayo: I-92 alumina ceramic lining tube yokurhabaxa kunye nesisombululo esinganyangekiyo